ज्योतिषमा शनि (Saturn) ग्रहको महत्व र यो ग्रहले मानव जीवनमा पार्ने प्रभाव, The importance of Saturn in astrology and its effect on human life, Saturn, Saturn planet, Mero Jyotish | Mero Jyotish
शनिको नाम सुन्दैमा धेरै व्यक्तिलाई भय हुन्छ। शनि (Saturn) लाई व्यक्तिहरु समस्या उत्पन्न गर्ने ग्रह मान्दछन्। जुन व्यक्तिमाथि शनिको कूदृष्टि पर्छ, त्यस व्यक्तिको जीवन नरक सरहको बन्दछ। तर शनिलाई लिएर बनाइएका यस्ता धेरै धारणाहरु गलत हुन् । वैदिक ज्योतिषमा शनि ग्रहलाई क्रूर ग्रह मानिन्छ। यसको साथै शनिलाई न्यायका देवता पनि भनिन्छ र शनिले अकारण कसैलाई पनि दुख दिंदैनन्। जातकको कर्मले नै उसको दिशा अर्थात् फलको निर्धारण गर्दछ। यो लेखमा हामी शनि ग्रहको बारेमा जान्नेछौँ । वैदिक ज्योतिषमा शनिको के स्थान छ?, शनि ग्रहको खगोलीय महत्व के छ? यन्त्र, मन्त्र र रत्न के हो? यसको साथै मानव जीवनमा शनिको के प्रभाव छ?
वैदिक ज्योतिषमा शनि ग्रहलाई कर्मको फलदाता भनिएको छ। शनि ग्रहको गति अन्य ग्रहहरुको तुलनामा सबैभन्दा ढिलो छ। जसको कारण यो ग्रह कुनै एक राशिबाट दोश्रो राशिमा जानलाई ढाई वर्ष अर्थात् साढे दुई बर्षको समय लाग्छ । यहि समयलाई वैदिक ज्योतिषमा अढैय्याको नामले जानिन्छ। हिन्दू धर्ममा शनिलाई देवता मानिन्छ। सौर्य मण्डलको एउटा ग्रह शनि (Saturn) को वातावरण अन्य ग्रहहरुभन्दा अलग छ। खगोल विज्ञान अनुसार शनि एउटा यस्तो ग्रह हो जसको चारैतिर रिङ्गको आकृति छ। यो आकृति खगोलीय पिण्डहरुद्वारा निर्मित छ। गुरुत्वाकर्षणको कारण पिण्ड यहाँ स्थिर छ। शनि सूर्यबाट छैटौँ तथा सौर्य मण्डलमा बृहस्पति पछिको दोश्रो सबैभन्दा ठूलो ग्रह मानिन्छ।
ज्योतिषमा शनि ग्रहको महत्व
वैदिक ज्योतिषमा शनि ग्रहको ठूलो महत्व छ। ज्योतिषमा शनि ग्रहलाई आयु, दुख, प्रविधिको कारक मानिएको छ। शनि ग्रह मकर र कुम्भ राशिको स्वामी पनि हुन्। ज्योतिष शास्त्रहरुको अनुसार तुला राशि शनिको उच्च राशि हो र मेष नीच राशि हो। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जुन जातकको कुण्डलीमा शनि उच्चको छ भने त्यो व्यक्ति राजा समान हुन्छ । शनि (Saturn) लाई २७ नक्षत्रहरुमध्ये तीन नक्षत्र पुष्य, अनुराधा र उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रको स्वामीत्व प्राप्त छ।
शनि ग्रहको मानव जीवनमा प्रभाव
जुन जातकको कुण्डलीमा शनि ग्रह लग्न भावमा विराजमान छ भने यो ज्योतिषीय दृष्टिबाट ठीक मानिदैन। ज्योतिष अनुसार लग्न भावमा शनि हुनाले जातक आलसी र हीन मानसिकताको हुन सक्छ। यद्यपी जातक गुणवान हुन्छ, परन्तु आफ्नो गुणहरुको सहि प्रयोग गर्न सक्दैन। यसको साथै यस्ता जातक एक्लै रहन रुचाउँछन्।
यदि जातकको कुण्डलीमा शनि प्रभावी वा शुभ ग्रहको साथमा छ भने यसको सकारात्मक फल प्राप्त हुन्छ। जस्तै हामीलाई थाहा भैसक्यो कि तुला राशिमा शनि उच्चको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा शनि प्रबल हुन्छ र यसको सीधा लाभ जातकलाई हुन्छ। शनिको शुभ प्रभावको कारण जातक कर्मठ, कर्मशील र न्यायप्रिय हुन्छ। शनिको कृपाले जातकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्दछ। जातक धीर तथा गम्भीर हुन सक्छ।
जुन जातकको कुण्डलीमा शनि (Saturn) पीड़ित वा अशुभ स्थानमा छ भने जातकले समस्याको सामना गर्नुपर्दछ। ज्योतिष अनुसार शनि मंगल ग्रहबाट पीड़ित छ भने यस्तो अवस्थामा जातकलाई दुर्घटना तथा न्यायिक समस्याहरु पैदा गर्दछ। जातकले जेल पनि जानु पर्ने अवस्था हुन सक्छ।
शनिको पौराणिक मान्यता
हिन्दू मान्यता अनुसार शनि सूर्य तथा छायाका पुत्र हुन्। त्यसैले शनिलाई छायापुत्रको नामले पनि सम्बोधित गरिन्छ। पौराणिक कथा अनुसार शनिदेव सूर्यका विरोधी हुन्। जसको असर मानव जीवनमा पनि देख्न सकिन्छ। वैदिक ज्योतिषमा सूर्य र शनिको युतिलाई शुभ मानिदैन । शनि न्यायका देवता हुन्, यो उपाधि स्वयं भगवान शिवले शनिलाई दिएका हुन्। शनि मानवलाई कर्म अनुसार नै त्यसको फल प्रदान गर्दछन्।
यन्त्र – शनि यन्त्र
मन्त्र - ऊँ शं शनैश्चराय नमः
रंग - कालो
उपाय – शनि (Saturn) को कुप्रभावबाट बच्नको लागि शनि देवको उपासना गर्नुपर्छ । यसको साथै सत्कर्म गर्ने र तिल तथा मासको दालको दान गरेर पनि शनिको प्रकोपबाट बच्न सकिन्छ।